kathmandu news Archives – Samacharpati
काठमाडौँ, १७ कात्तिक । आगामी मङ्सिर १४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य रिक्त पदको उपनिर्वाचनको तयारीका लागि चार जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार कास्की, भक्तपुर, बाग्लुङ र दाङमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय आज स्थापना भएको हो । स्थानीय तहको मात्र निर्वाचन हुने ३३ जिल्लामा […]
काठमाडौँ, १७ कात्तिक । सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि नयाँ–नयाँ नीति ल्याए पनि उनीहरु भने अझै पनि सन्तुष्ट हुनसकेका छैनन् । देशभरका वृद्धवृद्धाको हकहितका लागि काम गर्दै आएको अग्रज सेवा नेपालले विगत आठ वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आए पनि सार्वजनिक यातायातमा छुट, अस्पतालमा छुटलगायतका माग पूरा हुननसकेको अग्रज सेवा नेपालका उपाध्यक्ष प्रभा लम्सालले गुनासो पोख्नुभयो । “हामीेले सम्पूर्ण वृद्धवृद्धाको […]
जीवनमा सुखी र स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ ! बिहान सबेरै उठ्नुहोस्, योगा गर्नुहोस् !
काठमान्डाैँ, १४ कार्तिक । योगा गर्न को लागि सबै भन्दा आवश्यक कुरा तपाईं को शरीर र मन हो । योग ले शान्ति दिन्छ । जब तपाईं आफै भित्र शान्ति हुन्छ तब तपाईं अरूसित शान्ति संग बाँच्न सक्नु हुन्छ । यांत्रिक अभ्यास भन्दा ज्ञान राम्रो हो । ज्ञान भन्दा राम्रो ध्यान हो । योग स्वतंत्रता को […]
काठमाडौँ, १४ कार्तिक । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको छुट्टछुट्टै निवेदन दिएका जुवाडेलाई सबैको एकैसाथ म्याद तामेल गरेर हाजिर गराउन सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई आदेश दिएको छ ।भाइटीकाको अघिल्लो दिन काठमाडौँको महाराजगन्जबाट २ करोड ६७ लाख रुपैयाँसहित जुवाको खालबाट नियन्त्रणमा लिएका २५ जनामध्ये १४ जनाले प्रहरी गरेको पक्राउ गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चमा दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा उक्त आदेश आएको हो । […]
अघोरी बाबाले बिवाह गरेपछि ज्योतिषी अर्जुन क्षेत्रीकाे आपत्ति ! अघोरी बाबाको घाेर विराेध गर्दै सजाएकाे माग
काठमाडौँ, ९ कातिक । केहि समय अगाडी भविष्यवाणी गर्दै अपबाह फैलाएको आरोपमा पक्राउ परेका आफुलाई ज्योतिषी भन्ने अर्जुन क्षेत्रीले फेरी पनि अर्को अघोरी बाबाको टिकाटिप्पणी गरेका छन । ५८ बर्षको उमेरमा अघोरी बाबाले बिवाह गरेपछि अर्जुन क्षेत्रीले आपत्ति जनाएका हुन् । क्षेत्रीले आँफुमा अनुहार पढेर भविष्यवाणी गर्ने शक्ती भएको बताउँदै भोलीका दिनमा आँफु फेसरिडरका रुपमा […]
नवगायिका रजिता लामिछानेकाे पहिलो गीत ‘परलै मन पर्यो’
काठमाडौं, ८ कातिक । पछिल्लो चरणमा नेपाली संगीत क्षेत्रमा नयाँ कलाकारहरुको आगमन बढ्दो छ । संगीत क्षेत्रमै पनि धेरैको रुचि गायनमा रहँदै आएको छ । कतिले रियालिटि शोको माध्यमहरुबाट आफुलाई अगाडि बढाईरहेका छन् भने कतिले आफैलेनै गीतहरु रेकर्ड गरेर श्रोता दर्शकसामू आफु र आफ्नो कलालाई पुयाईरहेका छन् । यसै क्रममा नवगायिका रजिता लामिछानेले पनि आफ्नो पहिलो […]
काठमाडौँ, ७ कातिक । नेपाली र्‍यापर तथा गायक समिर घिसिङ (भिटेन) पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलिले जावलाखेलबाट पक्राउ गरेको हो । ‘चुरोट’ नामको गीतबाट चर्चा जमाएका उनलाई अश्लिल गीतहरू गाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो । यस अघि त ‘ह्याप्पी तिहार, चिसो बियर’ मा प्रयोग गरिएको शब्दका कारण विवादमा तानिए पछि […]
‘मैले जुन गल्ति गरे अरुले नगरदिनुहोला’ : दुर्गेश थापा
काठमान्डौँ, ६ कात्तिक । ‘ह्याप्पी तिहार, चिसो बियर’ मा प्रयोग गरिएको शब्दका कारण विवादित गीत गाएपछि पक्राउ परेका गायक दुर्गेश थापा रिहा भएका छन्। काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थापा आज नै गीत हटाउने सर्तमा रिहा भएको अपराध महाशाखाका एसएसपी सहकुल थापाले जानकारी दिएका छन्। प्रतिबन्धित लागुपदार्थ खाँदै तिहार मनाउँ भन्ने आाशयको विवादित गीत युट्यूवबाट हटाइएको प्रहरीले जनाएको […]
काठमाडौं, ६ कात्तिक । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आर्यघाटमा शव अन्त्येष्टि गर्दा लाग्ने शुल्क बढाएको छ । घाट सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा बढाउने सहमति गरेकै दिनदेखि कोषले शव अन्त्येष्टिको शुल्क पनि बढाएको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले नौ वर्षदेखि नबढेको शुल्क बुधबारबाट बढाइएको बताएका छन् । ढकालका अनुसार शव […]
काठमाडौँ, ३० असोज । नेपाल चलचित्र कलाकार संघले अन्तराष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज(ईनास) का नबनिर्बाचित पदाधिकारीहरुलाइ बधाई तथा भब्य स्वागत र सम्मान गरेको छ । नेपाल चलचित्र कलाकार संघको आयोजनामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा अन्तराष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाजको सस्थापक तथा निबर्तमान अध्यक्ष पुष्प बरुवाल, नबनिर्बाचित अध्यक्ष कमला दाहाल, बरिष्ट उपाध्यक्ष राम चन्द्र थापा, उपाध्यक्ष साबू गदाल कार्की, […]
काठमाडौँ, ३० असोज । सोयाविनमा कैयौं प्रकारका स्वास्थ्य समस्याको उपचार लुकेको छ । साथमा यसैमा कैयौं प्रकारको रोग बढाउने तत्व पनि हुन्छ । त्यसैले यसको सही प्रयोग गर्दा फाइदाजनक छ भने गलत प्रयोगले थप समस्या पनि सिर्जना हुन सक्छ । सोयाविन प्रोटिनको लागि महत्वपूर्ण स्रोत हो । यसमा मिनेरल्सको अलावा, भिटामिन बी कम्प्लेक्स र भिटामिन […]